V yokuphononongwa kwenoveli yeVendetta kunye namanqaku
yokuqalisa >> Iincwadi >> V yeVendetta nguAlan Moore noDavid Lloyd
Ukukhangela kwiwebhu kwithala leencwadi lesixeko sam ndiyifumene V yeVendetta nguAlan Moore noDavid Lloyd. Ndiyivile le noveli yemifanekiso njengomsebenzi wehlelo kwaye ndifuna ukuyifunda.
Ngokucacileyo kukho ulwazi ngakumbi kunakwimovie kwaye yonke into iyavakala. Apha sifumanisa ukuba u-V uvelaphi nemaski yakhe kaGuy Fawkes, ikapa kunye nomnqwazi wakhe. Siwuqonda ngcono umxholo kwaye kutheni ukuziphindezela kwenzeka.
Ngo-1998 i-London, ilizwe elalikhohlakele nelalikhohlakele elasekwa emva kwemfazwe. Indoda efihliweyo enekapa kunye nomnqwazi iyavela kwaye iqala ukubulala amagosa aseburhulumenteni.
Andibali ngaphezulu ngenxa yokuba andifuni ukonakalisa. Kodwa ngexesha lokufunda siza kufumanisa ukuba ungubani kwaye kutheni le mpindezelo. Kutheni le nto ehlala inyathelo elinye ngaphambili kwaye kutheni ebonakala eneempawu ezingaphezulu kobuntu.
Yonke into inxibelelana nezinye iziqwenga ezibini eziphambili. Leyo yosebenza naye kunye nomphenyi obalandelayo. Ukongeza, sinazo iziqwenga zesikhundla ngasinye esiphakamileyo esiya kuso.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba le volumu yindibaniselwano eyenziwe ngababhali, eyokuqala yayinamanani amaninzi
Enye yezinto endizithandayo zizicatshulwa zababhali ezichaza indlela uluvo olwavela ngayo kunye nazo zonke ezinye iindlela ababecinga ngazo, imizobo yabalinganiswa, iimeko ezinokubakho, nokunye okuninzi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, owona mzuzu undichukumisileyo ugqibezela incwadi yesi-2 yeCabaret yeSekela, xa emva kwesahluko esinamandla nesisendle, xa kubonakala ngathi akukho sizathu sokwenza kwakhe, uV uthi:
Ngaba ulonwabo luxabiseke ngaphezu kwenkululeko?
Kwaye ela binzana lisandenza ndicinge linika intsingiselo kuyo yonke into eyenzekayo. Ngokwenyani, leliphi ibinzana elifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Andicebisi ukuba isiphelo sizithethelele ngeendlela, kodwa ukuba ubone iinjongo zomlinganiswa, ngaphandle kokuya kwingxoxo-mpikiswano yokuba zichanekile okanye akunjalo.
Kodwa ukuba siqhubela phambili, mhlawumbi kuya kufuneka sizibuze ukuba kungabakho ulonwabo na ngaphandle kwenkululeko. Kuba lo mbuzo ubeka impendulo ukuba hayi, olo lonwabo alubalulekanga ukuba asinayo inkululeko.
Kwaye ukuba siye singena nzulu, kuya kufuneka sizibuze ukuba luyintoni ulonwabo kwaye yintoni inkululeko.
I-Vendetta yinto efana ne-Anarchy, esinye sezihloko ezifakwe kwinoveli yomzobo.
Ndifunde "okuninzi" malunga idemokhrasi kwaye enye ngenkululeko, kodwa akukho nto malunga nesiphithiphithi, kwaye umbono endinawo njengaye wonke umntu ongaphandanga nguloo sisiphithiphithi. Wonke umntu makenze into ayithandayo. Ndilinde ke ukuba ndifunde kwaye ndiphande ngakumbi malunga nesiphithiphithi.
Lo ngumxholo obalulekileyo kulo mdlalo, mhlawumbi ngaphezulu kunokuba sicinga, kuba wenza u-Alan Moore ukuba azikhuphe kwifilimu ngokungathethi ngenxalenye yesiphithiphithi.
-Iziphithiphithi ezininzi kunye neziphithiphithi, i-V ... ngaba sisiphithiphithi nje? Ngaba lo ngumhlaba wokwenza le nto uyifunayo?
-Akukho. Lo ngumhlaba wokuthatha into oyifunayo. Isiphithiphithi sithetha "ngaphandle kweenkokheli", hayi "ngaphandle komyalelo." Nge-anarchy kuza ubudala be-Ordunng, yomyalelo wokwenyani: Oko kukuthi, komyalelo wokuzithandela.
Ubudala be-ordhng buza kuqala xa umjikelo ongahambelaniyo we-verwirrung omameleyo uphela.
Ukulingana kunye nenkululeko ayizizo izinto zobunewunewu ezinokubekwa ecaleni njengesiqhelo. Ngaphandle kwabo, ucwangco luya kubanzima ukufikelela kubunzulu bokucinga.
Ifilimu kunye nomdlalo
Njengoko siphawulile, kukho ikomikhi yantlandlolo enezincwadi ezili-10, ingqokelela yomthamo omnye njengale ndiyifundileyo, nayo yenziwa ngababhali kwaye emva koko yifilimu ka-2005 ejikeleze iyelenqe lompu lika-1605.
Kudala kudala ndayibona okokugqibela kwaye nakwinto endiyikhumbulayo nangona izibakala ziphambili ziyafana, uninzi lweedatha endizibona zibalulekile asinakuze sizazi, njengemvelaphi ka-V.
Kuya kufuneka ndiyibone kwakhona, ngoku ndifunda ngokutsha kwaye ndiza kunika uluvo lwam ngeendlela ezingaphezulu.
Khumbula ingongoma ebalulekileyo. U-Alan Moore wazihlukanisa noshintsho kwifilimu. Wayengafuni ukubonakala kwiikhredithi ngokungavumelani nendlela isiphatho esaphathwa ngayo kwifilimu.
Iiroses ezisiwa nguViolet Carson Luhlobo luni lombala we-salmon elinegama lomdlali weqonga uViolet Carson, ewe, owaziwayo kuthotho lweBritane iCoronation Street
Ngamaxesha athile ahlekisayo basebenzisa ifayile ye- i-alfabhethi ye-aeronautical okanye i-icao phonetic alphabet, eyinkqubo eyilelweyo ukuze ikwazi ukunika ukuqiniseka okukhulu kuneradio radiocommunication. Isetyenziselwa ukudlulisa naluphi na uhlobo lolwazi, ngakumbi xa kuziwa kumanani okanye kumagama ekubhaleni nasekuqondeni ngokuchanekileyo kubalulekile.
3 Ifilimu kunye nomdlalo